Iimoto ezili-10 eziphezulu zabaqalayo
Ukuba unobutsha olutsha ukuhamba ngesithuthuthu kwaye ukhangele ibhayisiki ehamba phambili, noluhlu lwezithuthuthu ezi-10 ezihambelana neemfuno zabagibeli abaqalayo.
Musa ukwenza impazamo yokwenza isithuthuthu sakho sokuqala kunye ne-sportbike ephangaleleyo okanye i-cruiseight cruiser enamandla; Cinga ukuba mncinane, ulawule, kwaye ugcine engqondweni ukuba mhlawumbi uza kutshintsha indawo yakho yokuhamba ngokuhamba ngokukhawuleza kunokuhamba.
Ngeenqaku ezihambelanayo, khangela:
Iikhukhi ezilishumi eziPhambili
Iikhukhi eziPhambili eziPhambili eziPhambili
2014 Honda Grom ($ 2,999)
I-Honda Grom ka-2014 ayiyona nje ibhasi elincinci kunoluhlu lwabahamba ngesithuthuthu, lona lunomdla kakhulu.
Ukusungula i-Honda Grom ka-2014: Ingaba i-Runabout ye-3,000 ye-Runabout ivuselele ama-Minibikes?
I-Honda Grom encinci ifumana iTrro Racer Treatment
2012 Rebel Honda ($ 4,190)
I-rebel's trusty rebel is a standby kwiikhosi ze-Motorcycle Safety Foundation, kwaye ukuphakama kwayo kwesihlalo esingu-26.6-intshi kunye nokutshala kwe-243cc kwenza ukuba kube yi-cruiser ephezulu kubagibeli abatsha.
>> Cofa apha ukuze ubone i-Honda Honda Lineup
2015 Honda CBR300R (i-$ 4,399, i-$ 4,899 ne ABS)
I-suite ye- Honda CBR250R , i- CBR300R ihlaziywa nge-injini ekhudlwana ebiza ukuba i-17 ekhulwini ikhuphuka ngamandla kunye nokuphuculwa kwe-ergonomic kunye nokuphuculwa kwezinto. I-CBR300R ilwa neKawasaki Ninja 300 kunye ne-Yamaha R3 ezayo.
>> Cofa apha ukuze uhlaziywe ngo-2015 eCBR300R
Qhoqha apha apha kwi-Tech Cive ye-Honda CBR250R Tech
>> Cofa apha kwi-2011 CBR250R Igalari ye-Photo <<
2013 I-Kawasaki Ninja 300 (i-$ 4,799, i-$ 5,499 ne-ABS)
I-2013 Kawasaki Ninja 300. Ifoto © Kawasaki
Ngo-2013, ukuphuculwa kwe-Kawasaki Ninja 300 kwi-250R yayo ehloniphekileyo yandulela ukufakelwa kwamafutha, i-chassis eqinile, izibuyekezo ezininzi ze-hardware, kunye ne-ABS ekhoyo. I-Ninja 300 iqala kwi-4,799 yeeRandi kwaye isebenza kwi $ 5,499 nge-ABS.
Ukufumana olunye uphando kwi- 2013 Kawasaki Ninja 300 Review , kunye negalari yezithombe.
2011 Suzuki TU250X ($ 3,999)
I-Suzuki TU250X idibanisa umzobo wendabuko kunye ne-injection-injection-cylinder, kunye nokumiswa kokumangalisa. Akuhlanganisi nje kuphela ukudibanisa isithuthuthu esisezingeni eliqhelekileyo ejongene nemisebenzi yamanje, yenza njalo ngeteksi yentengo ephantsi kwe-$ 4,000.
Cofa apha ukuze uhlaziywe, kwaye uqaphele isiKhokelo sethu soThengi se-Suzuki .
2012 Yamaha V-Star 250 (i $ 4,190)
I-Star Star Motorcycles V-Star 250 ixabiso lentengo kwi-$ 4,190, kwaye ikhona kuphela kwi-Raven (oko kukuthi, abamnyama.) I-V-Star 250 iquka izibambo ezintsha, kwaye iza kudayiswa ngoNovemba, 2011. Ifoto © Star Motorcycles
I- V-Max enobukhulu be-Yamaha iyimveliso ye-halo, kodwa le V-Star i-250 inikeza isitayela sokuhamba ngeklasi kwi-package nayiphi na isiqalo esinokuyenza. I-twine ye-249cc ye-24-cooled air-cooled ye-249cc ihlawulisa ukujonga okubonakalayo ngebhayisiki encinane, kwaye ukuphakama kwesihlalo esiphantsi kwama-intshi ezingama-27 kwenza kube lula ukulawula.
Cofa apha ukuze ubone u-2012 Star cruiser lineup.
2012 Yamaha TW200 ($ 4,490)
I-fat TW-T200 ekhunileyo iyakwindawo efanelekileyo yokufumana i-cookie-cutter starter ibhasi, kwaye iinjongo zayo zombini zenza ukuba kube lula kwaye udoti lulungele. I-injin yayo ye-single-cylinder enye ye-196cc iqukethe inkcenkceshi yekhamera yokuzenzekelayo yokugcina ubuncinane.
2013 Honda CRF250L (i $ 4,499)
I-CRF250L entsha ye-Honda-ye-2013 ye-CRP250L inika umxube olinganiselayo phakathi kwamandla okuhamba kunye neendlela ezingekho komgwaqo; Izinto ezigqityiweyo ziquka injini ye-249cc echitshiweyo esuka kwi-sportbike ye-CBR250R.
Hlola ukuhlaziywa kwe-Honda CRF250L kunye nesiKhokelo sethu se- Honda Buyer Guide .
2011 Suzuki Boulevard S40 ($ 5,099)
Nangona ikwabelana ngezizukulwana kunye nabahamba ngeenyawo ezinjenge-M109R, i-Suzuki-level-level Boulevard S40 inesisindo esingama-381 lbs, kwaye ii-intshi ezingama-40 zeeyubhi enye-cylinder injini ivelisa u-63 mpg.
>> Cofa apha ukuze ube ngumkhokeli we-Suzuki Buyer 2011. "
2009 Honda CRF230M ($ 5,399)
I-Honda CRF230M ithatha iziganeko ze-CRF230L ye-double-purpose-like-body suspension journey and bodywork rocked-- kwaye iguqula ibe yibheyisi ye-supermoto eneesitulo .2 intshi ezimfutshane.
Cofa apha ukuze uhlaziywe.
Izikhokelo zekhadi loshishino
Ukugqitywa kwe-Putts kunye nendima yabo kwiMigangatho yeGalofu
IziTyikityo ezisisiseko kunye nendlela yokuzifunda